Ciidamada ammaanka ee Bangladesh oo dilay maskaxdi ka dambeysay weerarki Dhaka – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamada ammaanka ee Bangladesh oo dilay maskaxdi ka dambeysay weerarki Dhaka
Laamaha ammaanka ee Bangladesh ayaa aroornimada saaka dileen 4 qof oo u ku jiro maskadixi ka dambeysay weerarki lagu qaaday goob makhaaxi ah ee ku taala magaala madaxda waddankaas ee Dhaka biishi la soo dhaafay kaas oo lagu dilay 22 ruux oo u badnaa dad ajaanib ah.
Wararka dilitaanka 4 taas ruux ayaa waxa shaaca ka qaaday ciidamada ka hortaga falalka argagixisnimo ee waddankaas.
4 ruux ayaa la dilay kadib weerar saaka lagu qaaday goob ay ku dhuumaleysanaayen ee ku taalo deeganka Naraynganj oo ku taalo duleedka magaala madaxda waddankaas ee Dhaka waxana la dilay kadib marki ay diiden in ay isa soo dhiiban sida u sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada ammaanka ee wadankaas kaas oo lagu magacaabo Monirul Islam.
Tamim Ahmed Chowdhury oo u dhashay waddanka Bangaladesh balse qaatay dhalashada waddanka Canada oo ah ninka soo maleegay isla markaasina ka dambeeyay weerarkaasi ayaa kamid ah dadka la dilay.
Weerarkaas ayaa waxa horey masuuliyadiisa u sheegatay kooxda isu magacawday khilaafada islaamka ee ISIL iyado ay xukumadda Dhakana beenisay sheegashada ISIL ee weerarkaasi.
Ninkan hadda la dilay ayaa waxa u weerarkaas dhacay 1-da biisha July ayaa ka hor inta aysan laamaha ammaanka soo afmeerin weerarkaas socday muda dhan 12 sacadood waxa u ku dilay dad ka kala socday wadamada Taliyaniga,Japan,America Iyo India.
← Shirka TICAD oo si rasmi ah dalka ugu furmay
Xoghayaha guud ee gudiga qaran ee ciyaaraha olimpikada oo lagu xiray saldhiga muthaiga →
1 thought on “Ciidamada ammaanka ee Bangladesh oo dilay maskaxdi ka dambeysay weerarki Dhaka”
owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. http://www.yahoo.net